Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta u magacaabay xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiskiisa, Dr. Maxamed Ibraahim Nuur – Banaadir Times
By banaadir 29th December 2020 80 No comment
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta u magacaabay xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiskiisa, Dr. Maxamed Ibraahim Nuur oo ahaa la talaliyaha Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen.
Dr Nuur ayaa bedelaya Cabdirsaaq Caato kaasoo kamid ahaa xubaha ay aadka iskugu dhowyihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana jagadan loo dhiibay markii la eryay Xasan Cali Khayre Ra’iisul wasaarihii ay Baarlamaanku kalsoonida kala laabteen.
Caato oo xilka si ku meelgaar ah u hayey ayaa 1-dii August, 2020 waxaa laga xayuubiyey xilka isaga oo lagu bedelay Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim inkastoo maalmo ka dib hadana xilkaasi loo magacaabay ka dib.
Xoghayaha cusub ee xafiiska Wasiirka 1 aad ayaa kamid ahaa macalimiin wax ka dhiga jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya waxa uuna siyaasada soo galay ka gedaal markii uu dhowaan lataliye sarre u magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen.
Madaxweyne Laftagareen ayaa kamid ah madaxda maamul goboleedyadda ee ay aadka isku dhowyihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana la rumaysanyahay in uu ka shaqaynayo sidii madaxweyne Farmaajo ugu soo laaba lahaa doorashada 2021.
Maxaa looga hadlay Shirar gooni gooni oo ka dhacay Garoowe?
Ciidamada Haramcad oo howlgal ka bilaabay Magalada Beledweyne
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo ka hadlay go’aankii Xukuumadda una jawaabay Qoor Qoor